LibreOffice Dhirowa: Beyond Vector Graphics ... | Linux Vakapindwa muropa
Sezvaunoziva, LibreOffice Dhiza chirongwa chinosanganisirwa mune ino inozivikanwa yemahara suite suite. Mukutaura iri vector grafiki mhariri uye iine zvimwe zvishandiso zvekuratidzira. Inenge iri imwe nzira kune inozivikanwa Microsoft Visio, uye uchienzanisa zvimwe zvinhu neCorelDRAW software, pamwe nekumwe mashandiro emabasa ezvirongwa seMicrosoft Publisher, nezvimwe.
Asi kunze kwemagrafu uye madhayagiramu, izvo zvisinga zivikanwe nevashandisi vazhinji ndezvekuti inogona kushandiswa seinonakidza uye izere PDF gwaro mupepeti. Uye kuti utange kugadzirisa iri gwaro fomati zviri nyore neLibreOffice Dhirowa, iwe unongofanirwa kuteedzera mashoma matanho akapusa sekutsanangura kwandinoita pazasi
ari nhanho Kutanga kushandisa LibreOffice Dhirowa semupepeti wePDF ndeiyi:
Vhura LibreOffice Dhirowa pane yako distro.
Ipapo sarudza iyo PDF gwaro iwe unoda kugadzirisa. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kudzvanya paFaira> Vhura menyu uye sarudza iro gwaro rePDF kubva kumaneja wefaira.
Zvino, ese PDF zvemukati pane iyo LibreOffice Dhirowa skrini. Nezvishandiso zviripo iwe unozogona kushandura izvo zvaunoda. Kubva pamifananidzo, zvinyorwa zvemavara, kunyora kana kutangazve zvinyorwa, nezvimwe. Iwe unogona kunyange kushandisa chishandiso chekusarudza kusarudza mamwe magirafu kana zvikamu zvePDF iwe yawakavhura uye iwe unogona kuteedzera nekunamatira kana kuifambisa ...
Ukangopedza zvinotevera zvichave kutengesa mhedzisiro yacho kudzoka kuPDF fomati, zvikasadaro yaizochengetwa mu .odg, inova iri default fomati yeDraw. Kuita kuti zvikwanisike, tinya zvakare paFaira> Export As> PDF. Muhwindo uchakwanisa kusarudza zita uye sarudzo dzePDF fomati kana zvichidikanwa kuchinja chero.
Paunenge uchinge wachengeta gwaro sePDF, rinenge rakagadzirira kutumira kana kurishandisa chero zvaunoda. Sezvauri kuona, uye sekutaura kwandakaita, sarudzo dzekugadzirisa dzemamwe magwaro senge maPDF dzinoenda dzisingazivikanwe nevashandisi vazhinji ... Iye zvino unoziva kuti LibreOffice Draw inogona kushandiswa kupfuura kungo dhirowa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » LibreOffice Dhirowa: Beyond Vector Graphics ...
Oskar morales serrano akadaro
Ivo vanofanirwa kupa sarudzo yekuisa chete Dhonza uye kwete iyo suite yese kana kutanga kuitangisa yakazvimiririra. Mune zvimwe zviitiko Dhirowa inoshanda uye ine simba kupfuura Inkscape, saka inogona kuve yakanakisa imwe nzira kuCorelDraw uye kunyange Illustrator.
Dhirowa haifanire kuonekwa seyekushandisa kwechipiri uye iyo nyowani PDF mupepeti weSuite, inofanira kukuwedzera seLibreDraw, iyo multiplatform Vector Drawing sarudzo.
Pindura kuna Oskar Morales Serrano